Photos: 12 Ladies Live Show @ National Theater, 16 May 2011 | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos: 12 Ladies Live Show @ National Theater, 16 May 2011
Here are photos of 12 Ladies Live Show which was held on 16 May 2011 at National Theater, Yangon. Myanmar Popular Singers; Kaw Ni, Jenny, L Sai Zi, Chit Thu Wai, Yadanar Mai, Chan Chan, Eaint Chit, Thiri May, May Sabae Nyo, Swe Lan Phyu, N Kai Yar and Twinster performed for this concert. "5 Stars A Nyient" also joined for this concert. Chit Thu Wai
5 Stars A Nyient
မေလ (၁၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားက ဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ "12 Ladies Live Show" မှ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဒီပွဲမှာ နာမည်ရအမျိုးသမီး အဆိုရှင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကော်နီ၊ ဂျင်းနီ၊ L ဆိုင်းဇီ၊ ချစ်သူ့ဝေ၊ ချမ်းချမ်း၊ ရတနာမိုင်၊ အိမ့်ချစ်၊ သီရိဆွေ၊ မေစပယ်ညို၊ စွဲလန်းဖြူ၊ Nကိုင်ရာ နှင့် Twinster(အမွှာညီမ) တို့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြပါတယ်။5stars အငြိမ့်အဖွဲ့ကလည်း ဒီ "12 Ladies Live Show" ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်အားဖြည့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
homeMay 18, 2011 at 10:25 PMသဇင်လေး ပျောက်နေတယ်နော်..။ သူလေး မပါတာ များနေပီ..။ :(ReplyDeleteAung htweOctober 31, 2011 at 12:36 AMdvd အခွေဘယ်တော့ထွက်မှလဲ။ReplyDeleteအကြင်နာ နန်းတော်September 29, 2012 at 1:47 PMသဇင် သိချင်းမဆိုတော့ဘူး အောကားပဲရိုက်တာ...ReplyDeleteAdd commentLoad more...